မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): ကရင်စာပေ အက္ခရာဖြစ်ပေါ်လာပုံ
12:12 PM | Posted in article
ကရင်လူမျိုးတို့သည်နေထိုင်လာခဲ့သော မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသနှင့် ရှိနလွင်ပြင်မြစ်နှစ်မွာဒေသတွင် ကရင်လူမျိုးတို့သည် စာရေးခြင်းအတတ်ပညာကို တတ်မြောက်ခဲ့ကြပြီဟု သမိုင်းသုတေသီတို့က ဆိုကြ၏။
ဘီစီ (၄၀၀၀)နှင့် (၃၀၀)ခန့်တွင် ဆူမာရီးယန်းလူမျိုးသည် မျှားသွားပုံ အက္ခရာနှင့် စာရေး၍ အီဂျစ်လူမျိုးတို့သည် အရုပ်စာဖြင့် ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် အစောဆုံးစာရေးနည်း ရေးသားကြသည်ကို သမိုင်းပညာရှင်တို့ကဆို၏။
ကမ္ဘာ့အနှံ့ဆူမားရီးယန်းလူမျိုးတို့သည် ကျူနီဖေါင်းစာရေးနည်းကို ဆီမိုက်အနွယ်ဝင် ဘက်ဘီလုံးနီးယန်းလူမျိုးနှင့် အဆီးနီးယန်းလူမျိုးတို့က ဘီစီ (၂၅၀၀)ခန့်တွင် လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ၄င်းတို့ထံမှ တစ်ဆင့် အင်ဒိုဥရောပအနွယ်ဖြစ်သော ဟစ်တိုက်နှင့် ပါရှန်းလူမျိုးတို့ထံမှ ဘီစီ (၁၅၀၀) နှင့် (၆၀၀)ခန့်တွင် အသီးသီးပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။
အနောက်ဆီမင်းတစ်အနွယ်သည် ဖီနီရှန်ကုန်သည်များထံမှတစ်ဆင့် ဂရိလူမျိုးတို့က စာရေးနည်း အတတ်ပညာကို ဘီစီ (၉၀၀)ရာစုခန့်တွင် ရရှိကြပြီးလျှင် ဂရိတို့ထံမှတစ်ဆင့် လက်တင်၊ ပြစ်သစ်၊
ဂျာမန်စသော ဥရောပဘာသာစပေများ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေသည်။ ၁၅-ရာစုနှင့် စာပုံနှိပ် အတတ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် သာသနာပြုပုဂိုလ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် စာရေးခြင်းအတတ်သည် ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားပျံ့နှံ့ခဲ့ပေ၏။
အာရှရောက်စာပေအက္ခရာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်င့များဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ နီပေါလ်၊ တိဗက်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့၏ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော အက္ခရာများမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဘီစီ (၇)ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် ထွန်းကားလာသည့် ဗြဟ္မီအက္ခရာများဖြစ်၏။
+/- ဆက်ဖတ်ရန် ဆောင်းပါးများကျန်ရှိသေးသည်...
ဗြဟ္မီအက္ခရာသည် ဘီစီ (၈၉၀)ခန့်က ဖီနီရှန်ကျောက်စာများတွင် တွေ့မြင်ရသော မြောက်ပိုင်း ဆိမိတစ်အက္ခရာမှ ဆင်းသက်လာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၄င်းတို့အက္ခရာများကို မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသမှရှိသော လူမျိုးစုများက ယူဆောင်လာခဲ့ရာမှ ဘီစီ (၃)ရာစုခန့်က အသောကဘုရင်ကျောက်စာများကို ရေးထိုးထားသော အချိန်မှစ၍ ဗြဟ္မီအက္ခရာဟု အမည်တွင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့ရေးသားသောအက္ခရာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီစီ (၆)ရာစုခန့်တွင် စတင်ထွန်းကားခဲ့သော ဗြဟ္မီအက္ခရာပွားများဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပညာရှင်တို့က လက်ခံကြသည်။ အေဒီ (၄)ရာစုနှစ်ခန့်က သရေခေတ္တရာ ပျူလူမျိုးတို့ ရေးသားလျှက်ရှိသော အက္ခရာသည် အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းသုံး -ကဒမ္ဘ-အက္ခရာ-ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက လက်ခံကြသည်။
(ခင်ဘကုန်း - ရွှေပေချပ် (၂၀) ကို လေ့လာပါ)
ကရင်တို့သည် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသရှိ ရှနလွင်ပြင် မြစ်နှစ်မွှာဒေသမှ ရေးသားတတ်မြောက်သော စာပေကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသောအခါ အက္ခရာသစ်များရေးသားတီထွင်လာ၍ မူလရေးသားသော -ဆိမိတစ်အက္ခရာ- ကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ -ပလ္လ၀အက္ခရာ-ကို ဆန်းသစ်တီထွင်ကာ ရေးသားလာခဲ့ကြသည်ဟု စာပေအက္ခရာသမိုင်းပညာရှင်တို့က ဆိုကြ၏၏။
ကရင်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရေက်ရှိနေထိုင်သောအခါ ကရင်တို့ရေးသားသော -ပလ္လ၀အက္ခရာ-ဖြင့်ပင် မွန်လူမျိုးတို့သည်လည်း ၄င်းအက္ခရာစာနှင့် ရေးသားခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ပလ္လ၀အက္ခရာ-ဆိုသည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရှေးအကျဆုံး အသုံးပြုသော -ဗြဟ္မီအက္ခရာ-မူကွဲဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဂုတ္ထဘုရင် အုပ်ချုပ်စဉ် ဂုတ္ထအက္ခရာ၊ ကဒမ္ပဘုရင်အုပ်ချုပ်လျှင် ကဒမ္ပအက္ခရာ၊ ပလ္လ၀ဘုရင်အုပ်ချုပ်လျှင် ပလ္လ၀အက္ခရာသုံးကြောင်း သုတေသီတို့က ဆိုကြ၏။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ တိုင်း၇င်းသားအားလုံးတို့ရဲ့ ရေးသားတဲ့စာပေဟာ -ပလ္လ၀အက္ခရာ-တွေပါဘဲ၊ ဒီအက္ခရာဟာ အိန္ဒိယကုန်သည်ထံမှ တစ်ဆင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ
လက်ထဲကို ရောင်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေကဆိုတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေးသားတဲ့စာပေအများစုဟာ အက္ခရာသုံးတဲ့ သမိုင်းနဲပကြည့်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်မှာ -ဂုတ္ထအက္ခရာ-နဲ့ သက္ကဋဘာသာကျောက်စာတွေမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဟန်လင်းဘက်မှာက -ဂုတ္ထအက္ခရာ-နဲ့ ပျူဘာသာကျောက်စာတွေ တွေ့၇တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ -ဂုတ္ထအက္ခရာ-၀င်ရောက်လာတာဟာ အေဒီ (၄၀၀)ထက်မစောဘဲ (၆၀၀)ထက် နောက်မကျဘူးလို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေပြောပါတယ်။
သရေခေတ္တရာပျို့မှာရှိတဲ့ ပျူလူမျိုးတွေက ကဒမ္ပအက္ခရာသုံးတယ်။ (ဟန်လင်းပျူက - ဂုတ္ထအက္ခရာသုံးတယ်) သထုံနဲ့ မုတ္တမဘက်က မွန်လူမျိုးနဲ့ ကရင်လူမျိုးတို့မှာတော့ -ပလ္လ၀အက္ခရာ-နဲ့ ခရစ်အေဒီ (၇၀၀)လောက်က စတင်ပြီးတော့ အသုံးပြုတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။ ဒီထက်စောရင်လည်း စောနိုင်တယ်။
ကရင်များကလည်း အဲဒီခေတ်လောက်ဘဲ ကရင်စာကို ပလ္လ၀အက္ခရာနဲ့ ကရင်အသံထွက်အတိုင်း ပွားပြီတော့ သုံးတယ်လို့ အချို့သုတေသီများက ဆိုတယ်။
(၁) အနိရုဒ္ဒါ(အနော်ရထာ) ဘုရင်ဟာ ခရစ်နှစ် အေဒီ (၁၀၄၇-၇၇) နှစ်မှာ ဘုရင်မှတ်တမ်းကို သက္ကဋ၊ ပါဠိဘာသာရေးတဲ့စာနဲ့ ရေှးမှတ်တယ်။
(၂) ကျန်စစ်သား(ထီးလှိုင်ရှင်)ဟာ ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၀၄၄-၁၁၁၃) ခုနှစ်မှာ မွန်ဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
(၃) အလောင်းစည်(၁) ဟာ ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၁၁၃-၁၁၆၃) ခုနှစ်မှာ ပါဠိဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
(၄) ရာဇကုမာရ(ကျန်စစ်သား) ရဲ့ သားဟာ ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၁၁၃) ခုနှစ်မှာ ပါဠိ+မွန်+ပျူ+ဗမာ(၄)မျိုးပါတဲ့ မြတ်စေတီကျောက်စာကို ပလ္လ၀အက္ခရာနဲ့ ရေးထိုးထားပါတယ်။
(၅) နရပတိစည်သူမင်းဟာ ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၁၇၄-၁၂၁၉) ခုနှစ်မှာ ဗမာ (မြန်မာ)ဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
ရှေးဟောင်း ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ ရေးသားတဲ့ ပလ္လ၀အက္ခရာဟာ မွန်လူမျိုးနဲ့ တပြိုင်တည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအားလုံး ရေးသားတတ်ကြတဲ့ -မြန်မာစာ-ဟာ ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၁၁၃) ခုနှစ်လောက်မှ အစောဆုံးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
မွန်စာပေဟာ ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၀၄၄) ခုနှစ်မှာ သားတော်စောလူမင်း ခေတ်အဆုံး (၁၀၈၄) အေဒီ အထိနှင့် ကျန်စစ်သားမင်းလက်ထက် ခရစ်နှစ် အေဒီ (၁၀၈၄ မှ ၁၁၁၃)အေဒီနှစ်အထိ မွန်ဘာသာအစွမ်းကုန် ထွန်းကားသော အခါသမယလို့ ပါမောက္ခဒေါက်တာလု(စ်)က ဆိုပါတယ်။
ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၁၁၃ မှ ၁၁၇၃) ခုနှစ် အထိဟာ နှစ်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း -မွန်စာပေနဲ့ မြန်မာစာပေ ကူးပြောင်းရေးကြားကာလ- လို့ မှတ်ယူကြတယ်။
နရပတိစည်သူမင်းလက်ထက် ခရစ်နှစ်အေဒီ (၁၁၇၄-၁၂၁၁)နှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာစာပေ အရေးအသားဟာ ထီးသုံးနန်းသုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်ကို မြန်မာဘာသာ အစွမ်းကုန်ထွန်းကား
သော အခါသမယလို့ ပါမောက္ခဒေါက်တာလု(စ်)က ဆိုပါတယ်။
အေဒီ (၄၀၀-၆၀၀)ခန့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မြို့ဟောင်း (ဝေသာလီမြို့ဟောင်း) တောင်ခါးပန်းမှ တွေ့ရှိသော -ယေဓမ္မာ-ပါစာသည် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှ ဂုတ္ထမင်းအက္ခရာဖြစ်ပြီး သက္ကဋဘာသာဖြင့်ရေးသည်။
အေဒီ (၅၀၀-၆၀၀)ခန့်တွင် သရေခေတ္တရာကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် တူးဖေါ်ရရှိသော ရွှေလွှာချပ် (၂၀) -ယေဓမ္မာ-ပါသောစာသည် ပျူအက္ခရာ(သို့မဟုတ်)ပလ္လ၀အက္ခရာပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးသည်။
အေဒီ (၅၀၀-၆၀၀)ရာစု ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ပရပထုံစေတီတော်ကြီးအနီး ကျောက်တုံးနှစ်ခုပေါ်တွင် -ယေဓမ္မာ-ဂါထာနှစ်ခုပါသော ပလ္လ၀အက္ခရာဟာ မွန်ဘာသာဖြင့်ရေးသားသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့ ရေးသားထားသောစာတွင် အစောဆုံး ရေးသားထားသောပေစာမှာ မြန်မာသက္ကရာစ် (၁၀၀၀- ၁၂၀၀)ခုနှစ်ခန့်လောက်က ရေးသားခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ တနည်း (၁၈၇၃)
ခုနှစ်က ကရင်ပေစာ စတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့။
ကရင်စာပေ (၅) မျိုး
၁. လ်ုဝါ် (လ၀ိုက်) ကဗျာ
၂. လင်္ကာ (လင်ကာ) အလင်္ကာ
၃. သုပတ် (သလပတ်) စကားပြေအကျယ်
၄. အ်ုခ၀့် (အခေါ့) အနက်အဓိပ္ပါယ်
၅. လိက်အိင်း (လိုက်အိန်း) စကားပြေအကျဉ်း ဟူ၍ (၅)မျိုးရှိ၏။
အေဒီ (၁၈၃၂) ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ စကောကရင်ဘာသာဖြင့် အမေရိကန် နှစ်ခြင်းသာသ
နာပြု ရောက်လာသော ဒေါက်တာဂျွန်နသန်ဝိတ်က ပလ္လ၀အက္ခရာ (တနည်းအားဖြင့်) မြန်မာအက္ခရာစာလုံးများကို အသုံးပြု၍ စကောကရင်အသံထွက် စာရေးနည်းကို တီထွင်ပေးခဲ့၏။ ထိုနောက် အေဒီ (၁၈၃၅)ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ ၄င်းပုဂိုလ်ကပင် ဂရိနှင့် ရောမအက္ခရာများကို
အသုံးပြုပြီး ပိုးကရင်အသံထွက် စာရေးနည်းကို တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ ။
Posted by Sanghaalliance at 5:20 PM